यो कस्तो न्याय? ब ला त्का र भयो भन्दै अदालत गएकी महिलालाई न्यायाधीसले भने, ‘तपाईले शरीर समर्पण गर्नु भयो, सिद्ध बाबाले स्वीकार गर्नु भयो’ – Nepali Taja Khabar
यो कस्तो न्याय? ब ला त्का र भयो भन्दै अदालत गएकी महिलालाई न्यायाधीसले भने, ‘तपाईले शरीर समर्पण गर्नु भयो, सिद्ध बाबाले स्वीकार गर्नु भयो’
नेपालको कानुन दैवले जानून् भन्ने चलन छ । अनैतिक कार्य गरेको भन्दै अदालत प्रवेश गरेको एक मामिलामा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट यस्तै अनौठो फैसला भएको छ । यसमा भने महिलालाई नै दोषी देखाएर पीडितलाई सफाई दिईएको छ ।
सुनसरी चतरानिवासी सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीको मु द्दामा यस्तो अनौठो फैसलाको पूणपाठ सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सिद्धबाबा र अनुयायीबीच सहमतिमै यस्तो कार्य भएकाले ब ला त्का र हुन नसक्ने भन्दै सफाइ दिने फैसला गरेका हुन् ।
गिरीलाई थुनामै राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको १० दिनमै गत २२ मंसिरमा जिल्ला अदालत, सुनसरीले हतारमा फैसला गरी उनलाई सफाइ दिएको थियो । फैसलामा कानुनी प्रक्रियासमेत मिचेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीले असहमतिसमेत जनाएको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पेसी सार्न माग गरेर निवेदन दिएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी आरोपित पक्षको मात्र बयान सुनेर फैसला गरिएको थियो । अर्कोतर्फ उच्च अदालतको केही दिनपछि त्यससम्बन्धी पेसी तोकिएकोमा त्यसको टुंगो नलाग्दै कानुनी प्रक्रिया नै मिचेर फैसला भएपछि प्रश्न उठेको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध महिलाले गत मंसिरमै प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पुगेर गुनासो टिपाएकी छिन् । आफूलाई सुरुदेखि नै मु द्दा फिर्ता लिन दबाब आएको र प्रमाण हुँदाहुँदै सफाइको फैसला भएको उनले बताएकी छिन् ।
काठमाडौं बस्ने महिला पाथीभरा गएर फर्कने क्रममा गत वर्ष ३ कात्तिकमा चतरास्थित आश्रममा गएकी थिइन् । त्यही दिन बेलुका आफ्नो कोठामा बोलाएर ब ला त्का र गरेको महिलाको भनाइ छ ।
आफूले भोलिपल्टै उजुरी दिन खोजे पनि आफूलाई अनेक बहाना गरेर काठमाडौं पठाइएको ती महिलाको भनाइ छ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
यो पनि पढनुहोस; एजेन्सी । बलिउड नायीका रेखाको जिवन रहस्यले भरिएको छ । उनको नीजि जिवनको बारेमा चासो राख्नेहरु धेरै छन् । तर उनका बारेमा धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरु छन् ।
रेखाले १९९० मा भारतका चर्चित व्यापारी मुकेश अग्रवालसँग बिवाह गरेको थिइन् । उनी त्यो समयका चर्चित हटलाईन गुप्र र निकिताशा बान्ड्रका मालिक थिए । तर उनीहरुको विवाह एक वर्ष पनि टिकेन ।
सम्बन्धमा खटपट भएको कुरा सार्वजनिक भएको थिएन मुकेशले बिहेको एक वर्ष पछि अर्थात १९९१ मा रेखाको सलको प्रयोग गरेर नै देहत्याग गरेका थिए । उनको मृत्युले बलिउडमा तरङ्ग नै मच्चायो तर उनको मृ त्युको रहस्य भने गुपचुप नै राखियो ।
अहिले सम्म पनि उनले यस्तो निर्णय किन गरे भन्ने खुलेको छ्रैन । तर यो घ ट ना पछि भने रेखाको ब्यवसायीक जिवनमा निकै ठूलो असर गरेको थियो ।
उनका अघि निकै धेरै चुनौती आए । धेरैले रेखालाई गलत सोचे । अनुपम खेरले त उनलाई निकै तल्लो स्तरको टिप्पणी गरेका थिए । मुकेशले देह त्याग अघि एउटा नोट लेखेका थिए तर त्यस्मा उनले कसैलाई पनि आरोप लगाएका थिएनन् ।
उनले आफ्नो साथी तथा मनोचिकित्सक मुकेश अग्रवाललाई आफ्नो २ सन्तानको ख्याल गर्न र सम्पत्ति सम्हाल्न आग्रह गरेका थिए ।तर उनले आफ्नो सम्पत्ती रेखालाई भने नदिनु भनेका थिए । आफ्ना सन्तान मात्र सम्पत्तीको हकदार भएको उनको भनाई थियो ।
रेखाको बारेमा किताब लेख्ने यासिर उस्मानका अनुशार मुकेशले नोटमा रेखालाई नराम्रो भनेका थिएनन्, उनले रेखालाई उनी आफै सक्षम छन् त्यसैले मेरो सम्पत्तीको उनलाई आवश्यकता छैन भनेर लेखेका थिए । मुकेशका नजिकका मित्र तथा पुलिस कमिस्नर नीरज कुमारले रेखाले मुकेशको सम्पत्तिमा कहिले पनि आखाँ नलगाएको र अंश नलिएको बताउँदै आएका छन् ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरूद्ध मुद्दा चलाउने/नचलाउनेबारे प्रमाण बुझ्ने सर्वोच्चको आदेश
यी हुन भ्यालेन्टाइन डेमा श्रीमती रितालाई आफ्नो मृ’गौला उपहार दिने श्रीमान विनोद
पारसको १२ लाख खाएको बारे बोलिन सोनिकाकि आमा , सोनिकाको बदलिएको रुप, बोली र ब्यवहार पनि यसरी फेरीएछ, आमाले छोरी प्रति गर्व छ भन्दा यसरी भावुक भइन् सोनिका (भिडियो)